Kaafi News » WARAR
Madaxweynaha Soomaaliya Oo Ku Baaqay In Shir La Isugu Yimaado Magaalada Garoowe
Posted on February 9, 2021 in TOP NEWS, WARAR
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa madaxda dowlad goboleedyada ugu baaqay in 15-ka bisha Febraayo ee aan ku jirno shir la isugu yimaado magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Puntland.
Shirkaan ayaa la sheegay in uu dhammaystir u noqonayo heshiiskii doorashooyinka ee 17-September 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho.
Goor sii horraysayna waxaa madaxtooyada Villa Somalia kulan ku yeeshay maxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka, si ay uga arrin sadaan doorashooyinka dalka.
Dowladda Ingiriiska iyo dalalka kale ee Somaliland ka taageera Doorashooyinka ayaa sheegay in ay taageero dhaqaale iyo mid farsamo ku caawin doonaan Guddida Doorashooyinka Somaliland.
Hargaysa(kaafinews) Warsaxafadeed Wadajir ah oo ay soo saareen Dowladaha Sweden, Norway, Maraykanka , Germany iyo UK oo ay maanta baahisay wasaaradda arrimaha Dibadda UK ayaa lagu boggaadiyay Hannaanka ay u socdaan Doorashooyinka Somaliland ee Wakiillada iyo Deegaanka iyo sidii ay ku dhammaatay Diiwaangalintii codbixiyaasha.
Waddamadan ayaa sidoo kale ugu baaqay saddexda xisbi ee Somaliland in la ilaaliyo heshiiskii ay hore Saddexda xisbi uga gaadheen Qoondada Haweenka iyo Beelaha la hayb-sooco.
Bayaankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay madaxweynaha Somaliland sheegay in ay Somaliland iska bixinayso guud ahaan kharashka Doorashada.
Budhcad Isku Dayday In Ay Sumeeyaan Biyaha Magaalo Ku Taalla Mareykanka.